संसद विघटनको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा बहस नहुने, के रहेछ त कारण ? - Everest Dainik - News from Nepal
संसद विघटनको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा बहस नहुने, के रहेछ त कारण ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा आज सुनुवाई नहुने भएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीका पक्षमा वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मङ्गलबार अदालतमा शोक बिदा दिनुपर्ने भएकोले मंगलबार सुनुवाई हुन नसक्ने बताएका हुन ।
‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको दुःखद् निधन भएको छ, भोलि शोक बिदा हुन्छ, अब बुधबार मात्र सुनुवाई हुन्छ’ उनले भने।
याे पनि पढ्नुस ओलीको असंवैधानिक कदमले देश संकटमा धकेलियाे
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस भइरहेको छ। अझै प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट बहस बाँकी छ।
त्यसपछि विपक्षीहरुका तर्फबाट प्रतिवाद हुने र एमिकस क्यूरीको बहस पनि बाँकी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा यही साताभित्र सक्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कानून व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। हिजो वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड बालुवाटारमा, स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दै
यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो।